I-Slade Cottage - I-Airbnb
Southerndown, Wales, i-United Kingdom
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Rosamund
U-Rosamund Ungumbungazi ovelele
I-Slade Cottage ihlezi ogwini oluwina umklomelo we-Heritage, onqenqemeni lwedolobhana laseSoutherndown eVale of Glamorgan. I-Slade Cottage iyikotishi lika-4* likanokusho, elinikeza isitayela, ukunethezeka nendawo yokugcina.
Itholakala imizuzu emibili ukusuka e-Wales Coastal Path, iyindawo ekahle lapho ungahlola khona ugu oluwine imiklomelo.
IDunraven Bay, eGlamorgan Heritage Coast enhle yaseNingizimu Wales, iwuhambo lwemizuzu emihlanu ukusuka eSlade Cottage unqamule esigodini esihle sehlathi.
Indlu yamaholide ekhanyayo, ebanzi, indawo efanelekile yeholide lomndeni elikhumbulekayo. Izinja zamukelekile.
Ekupheleni komgwaqo wangasese wamayadi angama-600 futhi uzungezwe amadlelo aphilayo, indlu yamaholide (kanye neThe Hen House ibekwe egcekeni elincane 'leSlade' - 'indawo yokuhlala yomnumzane' eyayiyingxenye yeDunraven Estate manje ephethwe ngasese. Southerndown.
Kufakwe kule ndawo iSlade Farm - ipulazi likaNdunankulu eliphilayo neliwine imiklomelo, elihlinzeka ngenyama ku-Waitrose kanye nesitolo salo sasepulazini elise-St Brides Major eliseduze.
Ekhishini i-Aga ekhishwe ngamafutha yenza ihabhu elifudumele endlini.
Igumbi lokuhlala elinethezekile negumbi lokulala elingaphansi livulekele egumbini elikhulu elingadini elibheke amahektha ayi-9 amahle nanakekelwa ngokucophelela eSlade Garden.
Ingadi okwabelwana ngayo iyigugu langempela lale ndawo enenqwaba yezimbali zasentwasahlobo, utshani obuyindilinga nezihlahla ezivuthiwe, izindawo zokuhlala ze-willow kanye ne-rose ne-clematis pergolas - ingadi yemvelo evulwa minyaka yonke ngaphakathi kohlelo lwe-National Gardens. Yindawo enhle yokuphumula nokuhlola!
Igceke elingaphambili elibiyelwe liyindawo yangasese, evikelekile yangaphandle yokosa inyama noma nje ukujabulela isimo sezulu esihle.
Ukuhamba epulazini okuqondiswayo, ukugibela ugandaganda nolwazi oluningi mayelana nepulazi, indawo yemvelo yendawo kanye ne-Organics konke kuyatholakala kubavakashi bamakotishi.
Phakathi nebanga lokuhamba ngezinyawo kune-Three Golden Cups Pub noma zama i-Frolics ukuze uthole ukudla okumnandi kwesi-Italian - okulungele umndeni kakhulu.
IFabulous Dunraven Bay (Blue Flag), eGlamorgan Heritage Coast, 'Golden Coast' yaseNingizimu Wales, iwuhambo lwemizuzu emi-5 ngomgwaqo wezinyawo onezinkuni usuka kuleli khaya lamaholide elihle elivalekile.
I-Rosamund itholakala njalo ekuseni phakathi kuka-9.00am no-10.00am.
URosamund Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Southerndown namaphethelo